Tanora miisa 200 hatreto no efa nahazo fiofanana ho tradipraticien ka hiparitaka hiasa eto an-drenivohitra sy any amin’ny faritra. Betsaka ireo mangataka ny hanitarana ny FITRAMA any amin’ny faritra noho izany. Raha efa nanokafana ohatra ny ao Antsirabe sy Fiaranantsoa ary Vohipeno sy Farafangana dia faritra maro no mbola mangetaheta. Anisan’ny nanamafy izany filan’ny olona izany ny fahafantarana fa olona 600 isa hatreto no efa nahita fahombiazana, nanana olana ara-pahasalamana ka tonga nanatona teny amin’ny foiben’ny Hafari Malagasy teny amin’ny 67 ha sy teny Anosizato. Efa nahavita ny essai klinika rahateo izy ireo, izay marihina fa mitsabo ny aretina rehetra. Mankasitraka feno ny mpitondra ankehitriny araka izany ny FITRAMA nanome vahana feno ny fitsaboana nentim-paharazana hitsaboana ny Malagasy.